8 Inogona Soy Lecithin Powder Rubatsiro - Shangke Chemical
8 Zvinogona Soy Lecithin Powder Kubatsira
Kuzivikanwa kweiyo soy lecithin supplement yakapararira pasi rese sehuni yemoto, hazvishamisi kutengesa kweiyo soy lecithin yakawanda. Lecithin izita rakareba zvichireva mafuta akasiyana siyana anowanikwa nemuchisikwa pamwe nematehwe emhuka. Pamusoro pekuvandudza magadziriso ezvekudya, lecithin inozivikanwa zvakare nekukwanisa kwayo kuwedzera hupenyu hwesherufu yezvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvekudya zvakadai semafuta ekubikisa uye kupfeka saladhi.
Pakutanga, lecithin yakatorwa muzai York, asi nekufamba kwenguva, zvimwe zvakakosha zvinosanganisira cottonseed, hove dzegungwa, soya, bhinzi dzeitsvo, nyemba nhema, mukaka, sunflower uye chibage, zvakaonekwa. Pakati peaya, soya ari pakati pezvakapfuma lecithin zvinyorwa, uye izvi zvinounza kwatiri kune soy lecithin.
Chii chinonzi Soy Lecithin?
Soy lecithin chimiro che lecithin iyo inotorwa kubva kubikwa soya uchishandisa kemikari inogadziriswa senge hexane. Zvadaro, iyo yekubvisa mafuta inoitwa kuti ibvise lecithin kubva kune mamwe maproducts uye mushure meizvozvo, lecithin kuoma kunoitika. Icho chiri pakati pezvakanyanya kuwedzerwa zvekuwedzera pari zvino pamusika.
Soy lecithin poda inoshandiswa mune zvakajairika pamwe nevezvitoro zvekudya zvekudya sechinhu chinogadzirwa chikafu kuti chisimudzire hutano hwevatengi. Izvo zvinogadzirwa zvakagadzirwa soy lecithin poda inopa huwandu hwakawanda hwehutano hwezvibatsiro zvinosanganisira cholesterol kuderedzwa. Izvi zvinodaro nekuda kwavo kwepamusoro phosphatidylcholine uye phosphatidylserine yemukati. Aya maviri phospholipids anouya anobatsira mune yemunhu lipid kutsiva kurapa, pakati pemamwe mabasa.
8 Zvinogona Soy Lecithin Kubatsirwa
Sezvambotaurwa, soy lecithin ine zvakawanda zvakanaka, izvo zvikuru zviri:
Nhamba yakakwira ye cholesterol mumuviri wemunhu inokwevera njodzi dzinoverengeka dzehutano, iyo yakakomba zvakanyanya kuve iri kuwedzera njodzi yekushomeka kwemwoyo. Neraki, vatsvagiri vane chekuita ne soy lecithin zvinovaka vakawana kuti soy lecithin poda kana soy lecithin makapu anokwanisa kubatsira chiropa mukugadzira yakawedzera huwandu hwepamusoro-density lipoprotein (HDL), iyo inonziwo "yakanaka" cholesterol.
Kana huwandu hweHDL hunowedzera, iyo yakaipa cholesterol (yakaderera-density lipoprotein) nhanho inoderera. Kune dzimwe nzira dzekuti munhu anogona kudzikisa cholesterol level mumuviri wavo, asi achitora soy lecithin macaps, soy lecithin mukaka kana chikafu chine soy lecithin powder ndomumwe wemishonga inoshanda kwazvo.
Chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore kukanganisa kweiyo soy lecithin zvinovaka vanhu vane hypercholesterolemia (yakakwira cholesterol yakawanda muropa) .Vanoongorora vakati zuva nezuva soy lecithin inowedzera kudya (anenge mamirigiramu gumi nemashanu pazuva) yakakonzera kuderedzwa kwechiyeroollegi kwakakura kwakawanda mu hypercholesterolemia mushure memwedzi mumwe.
Panguva imwecheteyo, mwero weLDL cholesterol wakadzika nezvikamu makumi mana nezvishanu muzana uye makumi mashanu neshanu mushure memwedzi miviri. Izvi zvinoratidza kuti yenguva dzose soy lecithin yekuwedzera kudya kunogona kuve mushonga unoshanda we hypercholesterolemia.
2.Soy lecithin uye kudzivirira kenza yemazamu
Maererano nekuongororwa kwe2011 Epidemiology Journal yekutarisa soy lecithin uye chirwere chechipfuva chekudzivirira chirwere checancer, lecithin supplement kushandiswa kunogona kupa mukana wekuderedza dambudziko rekenza yemazamu. Vaongorori vacho vakaderedza chirwere chekenza yemazamu pakati pevakadzi vepa postmenopausal avo vanodya soy lecithin zvinowedzera mukati menguva yekuedzwa.
Zvinofungidzirwa kuti iyi kenza yekudzikisa kenza inogona kunge iri nekuti soy lecithin ine phosphatidylcholine. Pamusoro pekuchera, phosphatidylcholine inoshandura kune choline inoita basa rakakosha mukuderedza kenza.
Nekudaro, yakawedzera soy lecithin uye kenza yemazamu yekutsvagisa inodiwa kuti uone kana chaizvo, soy lecithin inogona kuva inoshanda nzira yekurapa yekenza yemazamu
3.Ulcerative colitis kuzorora
Ulcerative colitis, chirwere chemukati chechipfuva chinoratidzwa nechirwere chekugaya maronda ekuzvimba maronda ekuzvimba, chinoita kurwadziwa kwakawanda kunevanowirwa nako. Neraki, avo vakatora soy lecithin zvinovaka muviri vanonzwa zororo rezviratidzo zvechirwere.
Kana soy lecithin inowedzera inosvika colon, inonyudza, ichigadzira chipingamupinyi pane iyo linings yemudumbu uye kuvandudza mucous yayo. Chipinganidzo chinodzivirira colon kubva kuhutachiona hwehutachiona uye inobatsira kuita nani kugaya chikafu.
Zvirinani, tsvakiridzo inoratidza kuti iyo phosphatidylcholine iri mu soy lecithin poda inogona kuderedza kuzvimba kwakabatana ne ulcerative colitis. Izvi zviri kuwedzera kudzoreredza chipikiri chakabviswa nechirwere.
4.Better kunetseka kwepanyama uye kwepfungwa kubata
Soy lecithin ine phosphatidylserine, yakakosha phospholipid inozivikanwa kupesvedzera kusagadzikana mahormone. Kunyanya, vanotsvaga vanofungidzira kuti phosphatidylserine tata inoshanda nephosphatidic acid (iripo soy lecithin futi) kupa yakasarudzika kushushikana kuderedza mhedzisiro kumuviri wemunhu. Nekuda kweizvozvo, kumwe kuongorora kunoratidza kuti soy lecithin inogona kuve yakasarudzika marapirwo emamiriro ehutano ane hukama.
Pamusoro pezvo, zvakawanikwa zvekuongororwa zvakaitwa mugore ra2011 uye zvinowanika muAmerican Journal yeClinical Nutrition zvinoratidza kuti vanhu vane yakakwira choline kudya (kusanganisira yenguva zhinji soy lecithin vatengi) vakasangana yakaderera mumuviri uye mupfungwa kusagadzikana mazinga. Saka nekudaro, vane zvirinani zvekuita nekuyeuka nekudzora dementia kukanganisa.
Kana ichinge yatorwa sekurudzirwa, soy lecithin capsules inogona kugadzirisa ganda rako. Iyo inoshanda sosi yemushonga eczema neacne, nekuda kwayo hydration mali. Ndosaka soy lecithin iri kiyi yakakosha mune zvigadzirwa zve skincare.
Izvo zvidzidzo zvinoitwa pamhuka kuongorora maitiro e soy lecithin yakaratidza kuti inogona kukurudzira immune system. Zuva nezuva soy lecithin inowedzera batsira masero machena eropa pakurwisa kwavo zvipuka muropa.
7.Dementia zviratidzo zororo
Nekuda kweiyo yakakwira choline yezvinhu, soy lecithin inopa kutaurirana kuri nani pakati peuropi hwemunhu uye dzimwe nhengo dzemuviri. Izvi zvinodaro nekuti choline inonyanya kukosha mukutaurirana. Saka nekudaro, vanhu vanotambura nedementia vanogona kubatsirwa zvakanyanya kubva kune soy lecithin kana vakaibatanidza muzvirongwa zvavo zvezuva nezuva zvekudya.
8.Menopause chiratidzo chiratidzo kusunungurwa
Ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti soy lecithin inowedzera kudya inogona kupa yakakosha menoponse chiratidzo chiratidzo. Kunyanya, yakawanikwa kuwedzera simba, kuvandudza kwekunze kusimbisa uye kuunza huwandu hweropa kusvika kune zvakajairika pakati pevakadzi vevanhurume.
Mune chidzidzo chakaitwa muna 2018, vakadzi makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vane makore makumi mana kusvika makumi matanhatu vakashandiswa pakutsvagura sampiri kuti ishandiswe kana soy lecithin inowedzerawo kuvandudza zviratidzo zvekurapa pakati pevakadzi ve menoparance. Vamwe vakaiswa soy lecithin yekuwedzera hurumende uye yakasara pane placebo.
Mushure menguva yekuedzwa, vatsvagiri vakawana kuti vakadzi vaive pa soy lecithin yekuwedzera kosi vaive neanonamira mukukutu uye diastolic yeropa nekuenzaniswa neboka re placebo. Zvakare, yaimbova yekuneta chiratidzo chekuneta zororo, asi izvo zvange zvisizvo neboka re placebo.
Lecithin inoshanda sei?
Kunge mamwe phospholipids, lecithin mamorekuru anonyungudika mumvura asi mafuta. Nekudaro, kana mvura ikasanganiswa neoiri, mamorekuru achanyungudika musanganiswa zvakare. Muchokwadi, ivo vanowanzo kuwanikwa mumusanganiswa une mvura neoiri, kunyanya uko mamorekuru emvura anoyambuka neoiri mamorekuru. Munzvimbo dzakadai, iwo fatty acid inoguma anosangana neoiri uye nemapoka e phosphate mumvura.
Nekuda kweizvozvo, lecithin emulsify inokwanisa kugadzira tudiki tidziviriro tunotenderedza mafuta anodonhedza marara, nekudaro emulsering mafuta mumvura. Iwo ma phosphate mapoka anokwezva nemvura anotendera madonhwe emafuta ayo anogona, munzvimbo yakajairika, haambove aripo mumvura, kugara mumvura kwenguva yakareba. Izvi zvinotsanangura kuti nei mayonesi uye salad mapfekero asina kupatsanurwa mumafuta akasiyana uye mvura zvikamu.
Iyo soy lecithin mhedzisiro uye njodzi
Iko kunwiwa kwe soy lecithin kunogona kukonzera humwe hunyoro soy lecithin mhedzisiro. Iyo inowanzo soy lecithin mhedzisiro inosanganisira:
Izvo zvinokonzera soy allergies?
Kana muviri wako uchigwinya zvakanyanya nesoya, iwe unogona kugadzirira soy allergy pane kumedza soy lecithin. Saka, zvinokurudzirwa kuti ubvunze wako mupi wehutano hwekupa rubatsiro kana iwe ukasangana nezvinwiwa zve soya usati watanga kutora soy lecithin mukaka, soy lecithin inowedzera kune chero chimwe chigadzirwa chechikafu chine soy lecithin.
Saka, soy allergy iriwo pakati pezvinobvira soy lecithin mhedzisiro. Nekudaro, zvinongoitika pane zvisingawanzoitika.
Panogona kunge paine chinongedzo pakati pe soy lecithin uye estrogen mazinga mumuviri wako?
Pave paine kukakavara kwehukama nezvehukama pakati pe soy lecithin uye huwandu hweestrogen mumuviri wemunhu. Vamwe vanhu vanoti kunwiwa kweiyo soy lecithin kunogona kukanganisa kugadzirwa kwechisimba kwehomoni uye endocrine mahormone. Zvinogaroitika, kukanganisika kunogona kutungamira kumatambudziko akasiyana siyana ehutano kusanganisira nyaya dzekuenda kumwedzi.
Nekudaro, chaicho chinzvimbo ndechekuti hapana humbowo hwesainzi hunoratidza kuti muviri wemunhu unogona kushandisa "yekudyara estrogen" seyayo. Lecithin estrogen inogona kungokanganisa chiitiko chemunhu cheestrogenic kana ichibva kunobva mhuka. Chidzidzo chakaitwa naThorne Research chinotsigira chinzvimbo ichi. Izvo zvakawanikwa zvekutsvaga zvinoratidza kuti soya uye soy--zvigadzirwa hazvikonzeri zvinhu zveestrogenic muvanhu.
Naizvozvo, hapana hukama pakati pe soy lecithin uye huwandu hweestrogen mumuviri wemunhu.
Nzira yekutora Soy Lecithin Supplement?
Soy lecithin inowedzera inowanikwa mumhando dzakasiyana dzinosanganisira soy lecithin macapiritsi, soy lecithin mapiritsi, soy lecithin paste, soy lecithin mvura uye soy lecithin granules.
Izvo chaizvo soy lecithin dosage ihama kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe. Izvi nekuti zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana senge mamiriro ehutano hwakazara uye zera remutengi.
Zvakakosha kucherechedza kuti hapana humbowo hwakakwana hwesainzi hunoratidza iwo chaiwo mushumo we lecithin wakachengeteka kune imwe mamiriro ezvinhu. Nekudaro, nguva zhinji, dosage yacho inotangira ku500mg kusvika ku2,000mg, asi zvakakosha kuti ubvunze wako mupi wekuchengetedza hutano kuti akupe chiyero chakanyanya kwauri
Kunyange izvi zvisiri zvekufanirwa, zvinokurudzirwa kuti utore soy lecithin inowedzera pamwe neupfu.
Soy lecithin poda inoshandisa
soy lecithin poda inoshandiswa kuita zvakasiyana siyana zvinosanganisira:
Emulsification: Izvo zvekudya uye zvevakadzi zvigadzirwa vanogadzira vanoita soya lecithin kutenga kushandisa soy lecithin poda se emulsifier kana congealing mumiririri mumaitiro avo ekugadzira.
Cosmetic uye kuchengetedza chikafu: kana ichibatanidzwa mune zvigadzirwa zvekudya zvakaita s chokoreti, magirare, muto weband, chikafu chakabikwa uye saladi kupfeka kana zvigadzirwa zvezimhizha (makemikari, shampoos, ganda conditioners, muviri wash kana miromo yemafuta) soy lecithin poda inoshanda seyakaonda nyoro, vachiwedzera hupenyu hwavo hwefufu .
Vamwe vanhu vanoita soy lecithin kutenga kuti vashandise iyo lecithin sechengetedzo yezvaigadzirwa zvavo-zvakagadzirwa pamba uye zvigadzirwa zvekudya.
Choline kuwedzerwa: Vanhu vazhinji vanoita soy lecithin vanotenga nekuti ivo vanoziva kuti soy lecithin poda ndeye hupfumi choline sosi. Unogona kusasa imwe kana maviri maspuni eupfu pane makoji, muto, yoghurt, zviyo, oatmeal kana chero chimwe chikafu kana chinwiwa chaunofarira zuva rega rega.
Ichi chekuwedzera chinokupa iwe yakawanda yehutano hutano. Izvo zvakanaka zvinosanganisira panjodzi yechipfuva panjodzi, kuvandudzwa kugaya, kusava nekurwadziwa kuyambuka, hutano hwepfungwa, dementia chiratidzo chekumutsiridza uye kwakadzivirirwa kudzivirira, pakati pevamwe.
Lecithin uye Kurera Uremu
Lecithin inoita seyepanyama mafuta-anopisa uye emulsifier mumuviri wemunhu. Iyo yoline yemukati iri mu lecithin inomisa mafuta akaunganidzwa mumuviri, inowedzera simba rechiropa mafuta metabolism. Saka nekudaro, muviri unokwanisa kupisa huwandu hwakawanda hwemafuta uye macalories, nekudaro uremu.
Pamusoro pezvo, tsvagudzo inoratidza kuti vanhu vanotora lecithin vanoona kuita kwakanaka kwomuviri uye kutsungirira zvichienzaniswa nevaya vasingadaro. Naizvozvo, nelecithin supplementation, munhu anokwanisa kushanda nesimba zvakanyanya uye kwenguva yakareba, achikurudzira kuwedzera huremu.
Kupi Tenga Soy Lecithin
Ndiri kufunga nezve soy lecithin yekutenga kupi? Kana iwe ukatsvaga online, iwe uchaona kuti kune akawanda masosi kubva kwaunogona kuita soy lecithin uwandu hwekutenga kana iwe uchida soy lecithin yekutengesa. Nekudaro, iwe unofanirwa kuita nekushingairira kusimbisa kutendeka kwemutengesi kuona kuti iyo soy lecithin yakawanda iwe yaunotenga ichokwadi. Usavimba chero munhu anoti ane soya lecithin yekutengesa kana iwe usiri kuda kuwira mumaoko evanozvitengesa kana vatengesi venhema. Enda kune mutengesi akasimbiswa uye ane marezinesi.
Iko kushandiswa kweiyo soy lecithin yakawanda uye kubatsira kwayo kunodarika njodzi dzinogona kuitika uye mhedzisiro inosanganiswa nekushandiswa kwe soy lecithin. Nekudaro, soy lecithin vashandisi vanofanirwa kutevera iyo yakakurudzirwa kutora dhiini yekuwedzera kuti uwane zvakanyatsobuda mairi. Kunze kwezvo, pese pavanoda kuita kuti soy lecithin itenge yavo yekushandisa kana yebhizimusi, munhu anofanira kuve nechokwadi kuti vanoiwana kubva kunobva yakavimbika sosi.
Chung, C., Sher, A., Rousset, P., Decker, EA, & McClements, DJ (2017). Kuumbwa kwezvikafu emulsions uchishandisa zvakasikwa emulsifiers: Kushandiswa kwequillaja saponin uye soy lecithin kugadzirisa mvura kofi evachena. Nhoroondo yeChikafu Injini, 209, 1-11.
Hirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Mhedzisiro ye soy lecithin pane kupera simba uye zviratidzo zve menopausal mune vakadzi vane makore epakati: kuongorora kwakasarudzika, mapofu-maviri, kudzidza-kwakarongwa. Nhoroondo yehutano, 17(1), 4.
Oke, M., Jacob, JK, & Paliyath, G. (2010). Mhedzisiro ye soy lecithin mukusimudzira michero yemichero / mhando yemupunga. Kutsvaga kwekudya kwenyika dzese, 43(1), 232-240.
Yokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Chimiro che lyophilized liposomes inogadzirwa neasina kucheneswa soy lecithin: ongororo yemamiriro ezvinhu einin hydrolyzate microencapsulation. YeBrazil Journal of Chemical Injini, 29(2), 325-335.
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013). Njodzi inversion uye rheological maitiro mune soy lecithin uye Pakati pe80 yakavakirwa chikafu emulsions. Chinyorwa cheinjini chekudya, 116(1), 72-77.